Waftigii Madaxwayne Ku Xigeenka Oo Lagu Sabootiyey Odhaahyadii Saylac (Yaa Sxb Mudala Saidal Cabdala Tawakal calalaah) | lughayanews
Waftigii Madaxwayne Ku Xigeenka Oo Lagu Sabootiyey Odhaahyadii Saylac (Yaa Sxb Mudala Saidal Cabdala Tawakal calalaah)
Posted on January 1, 2013 by lugta
Boorama-(lughaya)-Madaxwayne ku xigeenka Somaliland Mud. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa maanta ka soo amba baxay magaalada Boorama iyada oo markaasi si balaadhan loo sii sagootiyay, taasi oo ay dadwayne aad u tiro badan oo tuban wadooyinka hareerahooda, maamulka gobolka kan degmada iyo salaadiinta gobolku si wayn uga qayb qaateen sii sagootin taasi.
M/Ku Xigeenka iyo wafdigiisa ayaa intii aanay Boorama ka bixin waxa ay soo booqdeen dhaawaca yaala cisbitaalka Boorama ee ku dhaawacmay mudaharaadadii Boorama ka dhacay, halkaasi oo uu madaxwayne ku xigeenku u rajeeyay caafimaad dhaqso ah, deeq lacag ahna farta ka saaray waalidiinta dhalinyaradaasi dhaawaca ahayd.
Wafdigan oo habeenimadii xalay kulan la qaatay odayaasha dhaqanka isla markaana aanan saxaafada loo ogolayn, ayaa Wasiirka wasaarada Gaashaandhiga Somaliland Mud. Axmed X. Cali Cadami uu saxaafada uga waramay waxana uu yidhi “ Waxan oo sii sagootin ah dhayl kuma iman, xalay oo dhan waan ogayn xaalku sida uu yahay, waxa aan dadaal ka galnay sidii aan arintan meel u saari lahayn, ugana baaqsan lahayn cadho aan ku kala tagno, eebe waa nagu guuleeyay waanan dhamayn, waxa aan ogsoonayn in dadku dadkayagii yahay, dalkuna dalkayagii yahay.
Wasiirka Wasaarada Shaqada iyo Arimaha Bulshada Mud. Maxamuud Axmed Bare Garaad oo halkaasi isaguna ka hadlay ayaa yidhi “ waa guul, runtii waxa guusha eebe ka sokow iska leh Madaxwaynaha Jamhuuriyada Somaliland Mud. Axmed Siilaanyo oo ay ka go’nayd in arintan la xaliyo noona soo diray, waxa kale oo aan leeyahay waxwalba waxa ay ku dhamaadeen guul iyo is afgarad. Waxana aan hambalyaynayaa Masuuliyiinta loo doortay inay qaadaan xilka degmada Saylac”.
Madaxwayne ku xigeenka Jamhuuriyada Somaliland Mud. Cabdiraxamaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna hadal dardaaran badan dadka u jeediyay ayaa yidhi “ Mumada reer Somaaliland Min Sool ila Saylac waa isku mid xaq isku mid ahna way leeyihiin, anagana waajib ayaa naga wada saran. Booqashadayadu waxa ay ahayd sidii wax loo xalin lahaa, nabad baan ku kala tagaynaa, wax intan ka dambeeyaa yaanay jirin”.
Madaxwayne ku xigeenku isaga oo hadalka sii wata waxa uu yidhi “ Dawlada iyo dadkiinaba ixtiraam ayay idiinka baahan yihiin, wax tabasho ah oo intaas ka dambaysaa yaanay jirin Somaliland dadkeeduna waa dad walaalo ah meeshay doonaan ha joogaane, waxa la idiinka baahan yahay in aqoonyahanka reer Awdal ay dadka soo dhaweeyaan oo ay umada walaaleeyaan oo ay ka baxaan qabyaalada iyo cunfiga ay wadatu, umadna walaaleeyaan:.
Booqashadan M/Ku Xigeenka iyo wafdiga uu hogaaminayay marka lagu lamaaneeyo natiijada ka soo baxday degmada Saylac ee ay xildhibaanadeedu doorteen Maayar iyo Ku Xigeen, waxa ay soo afjaraysaa murankii ka dhashay doorashada ee hadheeyay degmada Saylac, kulaylkeeduna uu soo gaadhay guud ahaan gobolka Awdal oo dhan.
« Daawo Damaashaadka maanta Boorama Daawo Video: Siday U Dhacday Dhaartii Xildhibaanada Degmada Saylac »